सावधान ! ध्यान नदिए तपार्इंको जिउ पुछ्ने तौलिया नै बन्न सक्छ काल • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
सावधान ! ध्यान नदिए तपार्इंको जिउ पुछ्ने तौलिया नै बन्न सक्छ काल
एजेन्सी । न्युयोर्क विश्‍वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिसिनका माइक्रोबायोलोजिस्ट फिलिप टियर्नोको भनाइमा भिजेको (नुहाएर जिउ पुछेको) तौलिया एउटा जीवित ‘अग्र्यानिज्म’हो। यस्तो, तौलियामा जीवाणू हुर्कन र वृद्धिका लागि चाहिने उपयुक्त वातावरण (जस्तोः पानी, तापक्रम र पर्याप्त अक्सिजन) हुन्छ। ओसिलो ठाउँमा ‘माइक्रोब्स’को बास हुन्छ।
यसै कारण टियर्नो भन्छन्, ‘कुनै पनि तौलिया धुनुअघि तीन पल्ट मात्र प्रयोग गर्नु ठीक हुन्छ। र त्यो पनि हरेक पल्ट प्रयोगपछि तौलिया पूर्ण रुपमा सुख्खा (सुकेको) हुनुपर्छ।’ तौलिया सुख्खा वा धेरै समय चिसो–भिजेको कुरा त्यसबाट आउने गन्धबाट थाहा पाउन सकिन्छ। ‘तौलियाबाट गन्ध आइरहेको छ भने, जहाँबाट गन्ध आउँदै छ, त्यहाँ ‘माइक्रोब्स’ मौलाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले तत्काल तौलिया धोइहाल्नुपर्छ,’ टियर्नो भन्छन्। ब्याक्टेरियाले भरिपूर्ण तौलियाले शरीर पुछे तपाईंका शरीरमा ती ब्याक्टेरिया सर्छन्। फलस्वरुप फोहर र संक्रमण सफा गर्न भर्खर तपाईंले नुहाएको सबै बेकार हुन जान्छ।
त्यसमाथि पनि यदि तपाईं तौलिया अरुसँग साझा गरिरहनु भएको छ भने तपाईंको शरीरले नचिनेका जीवाणु र संक्रमण तपाईंमा सर्न सक्छ। टियर्नो भन्छन्, ‘जस्तो कि ‘स्टेफ्नोककस औरस’ले घाउरडन्डीफोर आउन सक्छ वा संक्रमण हुन सक्छ ।’ तर के स्मरण गर्नु आवश्यक छ भने, सबै माइक्रोब्स हानिकारक हुँदैनन्। यथार्थमा तीमध्ये धेरै हानिकारक हुँदैनन् र लामो समयमा केही माइक्रोब्स लाभदायक पनि हुन्छन्। चिकित्सा क्षेत्रमा प्रचलित एउटा मान्यता ‘हाइजिन हाइपोथेसिस’ अनुसार सानो उमेरमा नै केही जीवाणू र केही निश्‍चित संक्रमण बालबालिकाले सामना गरे मात्र उनीहरूमा रोग प्रतिरोध क्षमता बलियो हुने र भविष्यमा सामान्यखालका संक्रमण सहजै पराजितगर्ने विश्‍वास गरिन्छ। यसो भन्दैमा गन्हाउने तौलिया कसैलाई पनि मन पर्दैन। खासगरी, त्यस्तो तौलिया जसको गन्धले नै जीवाणूको स्वर्ग भएको संकेत दिइरहेको हुन्छ।
जान्नुहोस् ! सेक्स भनेको के हो ? कतिबेला र कतिपटक गर्ने ?